"Edlulileyo nakwangoku" yeGrass eyenziweyo
Ngo-Epreli 1966, iAstrodome eHouston, eTexas, ibala lemidlalo elikhulu kakhulu ngelo xesha, yalinda ngokuzolileyo ukuqala kweligi ye-baseball njengesiqhelo, kodwa umahluko yayikukuba ngaphambi kokuqala, uChemstrand wabeka isiqwenga sokuqala somhlaba kumabala ebaseball- ”Astrotu ...
Inyama eyenziweyo isemlilweni, kwaye nengca eyenziweyo ilapha kwakhona!
Emva kokuphoxeka kwibhola ekhatywayo yaseTshayina, umzi-mveliso waseTshayina owenziweyo uyintshatsheli ephuma ngaphandle nangaphandle. Kutshanje, i-Jiangsu Co-creation Lawn, njenge "sabelo sokuqala se-turf eyenziweyo" kwintengiso yesabelo se-A, itsale umdla omkhulu. Uphando lwe-Shell Investment lufumanise ukuba nangona u-Chi ...
Yeyiphi imiba ye-turf eyenziweyo enokusetyenziswa kunye nendlela yokukhetha?
I-turf eyenziweyo yenzelwe kwaye yaphuhliswa kwiziphene zengca yendalo. I-turf yendalo ichaphazeleka ziimeko zemozulu, ulawulo kunye neemeko zokhuselo kunye nezinye izinto. I-turf eyenziweyo inezibonelelo ezingenakubekwa endaweni ye-turf yendalo. I-turf eyenziweyo ayifuni ukusebenzisa izixhobo ...